Castle iray isaky ny faritany Andalusia (II) | Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | Almeria, Granada, Malaga, Inona no ho hita, Tsangatsangana
Omaly no nitondranay anao ny lahatsoratra voalohany momba ny lapa ao Andalusia. Tao no nitondranay lapa 4 an'ny Andalusia farany andrefana: Huelva, Seville, Cádiz ary Córdoba. Androany izahay manome lapa anao isaky ny faritany Andalusian, fa amin'ity indray mitoraka ity ireo voafidy avy amin'ny faritanin'i Malaga, Jaén, Granada ary Almería. Amin'ny maha-tsara tarehy azy na mihoatra noho ireo hita hatreto dia manana zavatra betsaka hatolotra izy ireo.
Aza adino izany! Ary raha te hamaky ny lahatsoratra voalohany ianao, dia jereo eto.
1 Ny Alcazaba any Malaga
2 Castle of Bury al-Hammam any Baños de la Encina, Jaén
3 Castle of La Calahorra, any Granada
4 Kompania goavambe an'ny Alcazaba any Almería
Ny Alcazaba any Malaga
Eo amin'ny tehezan'i Malaga, eo an-tendrombohitra Gibralfaro, no mijoro io trano mimanda mahafinaritra nataon'ny olombelona io hatramin'ny andron'ny Fenisianina. Ny Alcazaba amin'izao fotoana izao mitahiry fananganana amin'ny dingana maro niainana tany Al-Andalus taloha: manomboka amin'ny Kalifa, hatrany amin'ny fanjakana Taifa, amin'ny alàlan'ny Almoravids sy Almohads. Taorian'ireny dingana rehetra ireny dia namboarina tsikelikely ny Alcazaba any Malaga satria hita ny fahasimbana nateraky ny fandehan'ny fotoana.
Fa maninona no ity fanamboarana any Malaga ity? Izy io dia nipetraka tamin'ny governora tao an-tanàna nandritra ny taonjato maro ary natao fialofana sy trano ho an'i Fernando el Católico, nandritra ny vanim-potoana ady tany Granada. Avy amin'ny faritra avo indrindra amin'ny Alcazaba, azontsika atao ny mieritreritra ny iray amin'ireo fomba fijery tsara indrindra ao an-tanànan'i Malaga.
Castle of Bury al-Hammam any Baños de la Encina, Jaén
Bury al-Hamman Castle dia fantatra ihany koa amin'ny Trano Burgalimar ary trano mimanda Umayyad natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy, natsangana teo an-tampon'ny havoana kely, ka manjaka amin'ny faritra manontolo ao an-tanànan'i Baños.
Ny rindriny dia misy totaliny tilikambo efatra ambin'ny folo, miampy iray Tilikambo Fiambenana Kristiana. Io no trano mimanda voatahiry tsara indrindra hatramin'ny andron'ny Umayyad Caliphate of Córdoba, ary iray amin'ireo trano mimanda silamo voatahiry tsara indrindra eran'i Espana. Nosokajina ho tsangambaton'ny firenena izy tamin'ny 1931, ary toerana manan-tantara-kanto tamin'ny 1969.
Raha ny angona hanasongadinana dia tsy maintsy milaza isika fa io no lapa faharoa tranainy indrindra any Eropa ary, nanomboka tamin'ny 1969, ny Tower of Homage dia afaka manofahofa ny sainam-piarahamonina eropeana, tombontsoa nomen'ny filankevitra eropeanina, ary tsy nizara afa-tsy tamin'ny Castle of Florence.
Tsy izy no tsara indrindra ety ivelany, ary tsy manana ny endrika mahazatra an'ny lapa angano fa azo antoka fa mahavariana ny eo an-tongony.
Castle of La Calahorra, any Granada
Ity lapa mahaliana ity dia eo afovoan'ny havoanan'i Granada, irery sy amin'ny faritra misy hatsarana voajanahary mahavariana sy tena izy. Izy izay dia fananganana ny fianakavian'i Mendoza Tamin'ny fotoanan'ny Renaissance dia fotoanan'ny lapa saingy niavaka io fanamboarana io satria avy any Italia ny aingam-panahiny. Ity sanganasa voalohany amin'ny Renaissance Andalosiana ity dia asan'ny maro fa ny sasany amin'ireo mpanao mari-trano italianina nandray anjara.
Ny rindrina sy ny tilikambony dia matanjaka fa ny atiny somary "marefo" kokoa: afaka mahita a patio kanto sy be pitsiny, mitovy amin'ny an'ny lapan'i Canena sy ny lapa Vélez-Blanco, izay voatahiry mitohy ao amin'ny Metropolitan Museum of Art any New York.
Kompania goavambe an'ny Alcazaba any Almería
La Alcazaba an'ny Almería dia azo jerena na aiza na aiza misy ny tanànan'ny Almeria, izay lehibe indrindra amin'ireo citadels naorin'ny Arabo manerana an'i Espaina. Miakatra sy midina ny rindriny Havoanan'i San Cristóbal ary manintona fomba fijery manaitra, ka nahatonga sary tsy mampino nataon'ny mpaka sary matihanina sy mpankafy.
Avy eo an-tampon'ny rindrina dia afaka mahita fahitana mahafinaritra ianao, na amin'ny tanàna izany na amin'ny seranana, ka mahatonga ireo iray amin'ireo fahatsiarovana tsara indrindra azonao raisina avy amin'ny tanànan'i Almeria.
Ao anatiny, izay misy arivo taona mahery ny tantara, dia mahita isika avy amin'ny fiarovana miozolomana marobe mankany amin'ny zavamaniry vaovao izay nampiana taorian'ny Reconquest, namboarina tamin'ny alàlan'ny Mpanjaka katolika. Raha atotaly dia misy vala 3 misy rindrina mandrafitra azy.
Ahoana ny hevitrao momba ireo lapa 4 ireo? Misy olon-kafa tianao kokoa noho ireo notapahanay hevitra horesahina eto ve? Raha izany dia ampahafantaro anay ao amin'ny faritra misy ny hevitray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Malaga » Castle iray isaky ny faritany Andalusia (II)